13 ihlalisa Embraer Legacy 650 Aircraft Aviation Interior ukubuyekeza Private Jet Air Charter Flight Izikhungo ibhizinisi noma siqu indiza Rental Inkampani eduze kwami ​​ukuhamba uya khona elandelayo maphakathi no-isayizi deadhead umshayeli ezingenalutho umlenze quote endaweni yakini.
Uma kuziwa charter Jets azikho ukushoda ongakhetha. Omunye ukukhetha ethandwa iyona Embraer Legacy 650 ekuphonsweni. Lokhu Legacy Embraer 650 Ukubuyekeza ekuphonsweni uyakuwaphula izizathu kungani abaqondisi abaningi nabanye abathatha charter izindiza ukukhetha lokhu indiza ethile izindiza zabo zangasese.
I Embraer Legacy 650 uwukubonakaliswa ukunethezeka nesitayela. It has kumakhabheni ezintathu ezihlukene futhi ikamelo kuze kube 14 abagibeli. Lokhu jet has endlwaneni eyakhiwe isikhala kakhulu ekilasini yayo futhi iza credenza, lezingubo ngokugcwele, kanye 134 cubic unyawo lavatory (futhi ngobukhulu ekilasini yayo).
I Embraer Legacy 650 ine yesiqinisekiso elide kunawo wonke umkhakha ngesikhathi 10 iminyaka noma 10,000 indiza amahora. Ukwengeza, Ukwesekwa kwamakhasimende ithimba yenkampani iyasebenza 24/7, futhi kukhona phezu 70 service izikhungo emhlabeni wonke anikelwe wena jet yakho. Yingakho Embraer iye zibalwa #1 e nokwesekwa kwamakhasimende siphindaphinda, futhi lokhu futhi kungani kukhona okwamanje phezu 1,200 lezi Jets enkonzweni nge elihlangene 26 abayizigidi ezingu amamayela zafinyelela.
Okuphansi Operating Izindleko
Embraer Legacy 650 Aerospace jet yangasese charter izindiza bakhethe amanye ephansi kunciphise nezindleko emhlabeni. Lokhu jet ukusetshenziswa okusezingeni eliphezulu isebenzisa uphethiloli izinjini kahle kanye nomklamo indiza asho ke has nokugcinwa izindleko ezisebusweni par labo kwabaningi ezimbili gumbi izindiza. Lahlukene 3,900 nautical miles (abagibeli abane) kanye nomthamo Inkokhelo cishe 5,000 ukushaya kulula ukubona ukuthi kungani abaqondisi abaningi ukhethe lokhu jet kuphela.
Uma udinga jet okunokwethenjelwa futhi ivulekile elenza abagibeli sazizwa sikhethekile futhi kubenza bakwazi ukusebenza kahle ke Embraer Legacy 650 siyindlela okuqinile. Sihlanganisa okunethezeka, nokwethenjelwa kuphinde kunciphise nezindleko ukunikeza abasebenzisi nge indiza elisebenza enkulu ukuthi uyisebenzisa imisebenzi yezebhizinisi noma yokuzijabulisa.
EMBRAER Jet Legacy 650 Isithakazelo ngokuhamba kwesikhathi:
EMBRAER yendiza Legacy 650 Isithakazelo nge subregion
Instagram: EMBRAER 750 Legacy 650 Ekuphonsweni Interior
Embraer Legacy 650 Aircraft Aviation elibizayo Interior Private Jet Charter Flight Izikhungo #emptyleg #Jetcharter #emptylegs #wysluxury #Embraer # EmbraerLEGACY650Jetairliner # EmbraerLegacy650 # EmbraerLegacy650seating # EmbraerindustrieLegacy650 #Legacy 650Embraer #Luxuries #lifestyle #traveler
Iposi olwabiwa WysLuxury JetCharter (@wysluxury) on Dec 10, 2017 at 6:53pm PST